गणतन्त्रमा न्यायको चक्रब्यू: जय प्रकाश आनन्द - Madhesi Youth
हातको औंलामा लाउनु भएको औंठी घुमाउदै देउवा जीले अघिल्लो साँझ राजासंग भएको कुराकानी सुनाउनु भयो । भ्रष्टाचार बढेर संसदीय ब्यवस्था नै कमजोर भएकोमा राजा ज्ञानेन्द्र बडो चिन्तित छन् रे ! अख्तियार कारवाही गर्न उद्यत भएको छ रे ! तपाई ४/५ जना मंत्रीहरूले राजिनामा गरिदिनु पर्यो भन्ने राजाको सुझाव छ रे ! राजाले भनेको रे “पिएम, आईदर दे रिजाईन और दे सूड प्रिपेयर टू फेस प्रिजन !” देउवा जी मार्फत सुनेको राजाज्ञाबाट म स्तब्ध भएको थिए ।
टेक्ने समाउने कतै ठाँउ नभएको म नराम्रो गरी फसें । मुद्दा झेले । “अन्त भला तो सब भला” भने झैं अपमान र अवसादका केही बर्षपछि बिशेष अदालतले मलाई सफाई दियो । हिसाब गरेर मेरो सम्पति आय भन्दा बढी न रहेको भन्यो । राजनीतिका लागि मन मरि नै सकेको थियो । तरपनि लाग्यो..अब कमसे कम ईज्जतका साथ बाँच्न त पाइएँला ।
मैले न गर्नु पर्ने काम गर्न पुगे । पुष्प कमल दहाल प्रचण्डको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारमा मंत्री भए । यो अर्को ठूलो गलती मैले गरें ।
यसपछि मैले नाई भन्दाभन्दै प्रम प्रचण्ड जी ले संबैधानिक परिषदको सदस्य तोकिदिनु भयो । यो परिषदले संबैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिश गर्दछ । पहिलो बैठकमै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधिशको नियुक्तिको सवाल आयो । प्रम प्रचण्डले मलाई खिलराज रेग्मीको नाम सिफारिश गर्न भन्नु भयो । न्यायाघिशहरूको वरियता क्रममा खिलराज तेस्रो हुनुहुन्थ्यो । पहिलोमा मीन बहादुर रायमाझि र दोस्रोमा अनुप राज शर्मा हुनुहुन्थ्यो । रामचन्द्र पौडेल संसदमा बिपक्षी दलको नेता भएकोले संबैधानिक परिषदको सदस्य हुनुहुन्थ्यो; उहाँ अनुप राज शर्माको पक्षमा रहनु भएको थियो । प्रचण्ड जीले मलाई खिलराज रेग्मीसंग भेट गराउनु भयो र उहाँ पछिसम्म सहयोग गर्नु हुने भएकोले प्रधान न्यायाधिशमा सिफारिश निम्ति सहयोग माग्नु भयो । म ठूलो दबाबमा परे । पहिलो दिनको बैठकमा म जानाजान अनुपस्थित भए, फलत: सो बैठकबाट निर्णय हुन सकेन । प्रचण्ड जीले चित्त दु:खाउनु भयो । मैले उहाँलाई संझाउने प्रयत्न गरे । अन्तत: मेरा हठका कारण पहिलो वरियतामा रहनु भएको मीन बहादुर रायमाझिको नाम नै सिफारिश भयो । रामचन्द्र पौडेल जी त अनुप राज शर्मालाई सिफारिश गरी बीचको बाटो रोजौं भन्नु भयो । तर, परम्परा मिचिए पछि अनुप राज किन ? खिलराज किन नाई ? यसको हेक्का पछि मात्र उहाँलाई भयो । मीन बहादुर जी कै नाम सिफारिश भयो । त्यस बखत सर्वोच्चका केही न्यायाधिशहरूले मलाई बडो प्रशंसाका साथ धन्यवाद दिनु भएको थियो, मीन बहादुर जीको भावुक धन्यवाद म आज पनि संझि रहेको छु । अनुप राज जी रिसाउनु भएन, तर खिलराज जी रिसाएको कुरा सुन्न थालियो ।
मधेसी मोर्चा र माओवादीको सरकार गठन भयो । बिशेष उद्देश्यका खातिर यो सरकार बनेको थियो । म पनि मंत्री भए । मेरो दुर्भाग्य, म फेरी संबैधानिक परिषदको सदस्यमा मनोनित भए । प्रम डा. बाबुराम भट्टराईले मलाई मनोनित गर्नु भएको थियो । प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मी पनि सदस्य हुनु हुन्थ्यो । मेरो मुद्दा पुनरावेदनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन थियो । न्यायाधिश तप बहादुर मगरको इजलासमा हेर्दाहेर्दैको स्तरमा थियो मेरो मुद्दा । मेरो समेतको उपस्थितिमा संबैधानिक परिषदको दुई वटा बैठक भैसकेको थियो । कुनै अन्यथा प्रश्न उठेको थिएन । मलाई सबै कुरा सहज लागेको थियो । तर, मेरो निम्ति सहज रहेन ।
बिना मौसमको बाँसुरी बजेको झै अंग्रेजी समाचार दैनिक “दी हिमालयन टाईम्स” को मुख्य पृष्ठमा यौटा समाचार छापियो । समाचारको सार थियो;
“जेपी गुप्ताको भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ र यिनै जेपी गुप्तासंग सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश संबैधानिक परिषदमा बस्नु परेको छ । यस बारे प्रधान न्यायाधिश प्रधान मंत्रीसंग आफ्नो असंतुष्टी जनाउनु भएको छ ।”
मैले यस समाचारका वारेमा “दी हिमालयन टाईम्स” मा बुझे, प्रघान न्यायाधिशका प्रेस सल्लाहकार थिए एक जना विमल नामका, उहाँले नै सो समाचार दिएको र छापिदिन अनुरोध गरेकोले छापिएको बताए ।
तप बहादुर मगर स्वच्छ छविको तथा कसै प्रति पूर्वाग्रह नराख्ने न्यायाधिश भनी चिनिनु हुन्थ्यो । उहाँकै बेंचमा मेरो मुद्दा चल्दै थियो । हुनुपर्ने सबै कुरो भैसकेको थियो । वादी प्रतिवादीको बहस जिकीर, प्रमाण बुझ्ने सबै भैसकेको थियो । निसु भन्छन् नि, निर्णय सुनाउने त्यति मात्र बाँकी थियो ।
न्यायाधिश तप बहादुरजी को अवकाश हुन धेरै बाँकी थिएन । निर्णय सुनाउने भनी तोकिएको पेशी सोही दिनको दैनिक कज लिष्टबाट हटन थाल्यो । लगातार तीन पटक निर्णय सुनाउने पेशी स्थगित गरियो । प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मीले तप बहादुर मगरबाट फैसला सुनाउन दिनु भएन । निरीह स्वरमा फाँटबाला उप रजिष्ट्रारले मलाई भने । अन्तत: न्यायाधिश तप बहादुर मगरले फैसला सुनाउन नपाइकनै पदावधि समाप्त भै अवकाश पाउनुभयो । म पुरै न्यायिक चक्रब्यूहमा परिसकेको थिए ।
खिलराज रेग्मी जी ले मेरो मुद्दा न्यायाधिश सुशीला कार्कीको डिविजन बेंचमा तोक्नुभयो । सम्पूर्ण कारवाही सकिएको र निसुको तहमा रहेको मुद्दालाई अब नयाँ न्यायाधिशले कसरी अगाडी बढाउनु हुन्छ ? यस प्रश्नमा दुबै पक्षका बीच छलफल हुन नपाउँदै न्या. सुशीला जी ले शुरू देखि नै पुन: मुद्दा हेर्ने आदेश दिनु भयो । बास्तवमा मेरा मुद्दा सुशीला जी ले हेर्नु उचित थिएन । मेरो र न्यायाधिश हुनु पहिले सुशीला जी को राजनीतिक आस्थाको आधारमा, समान राजनीतिक दलमा संलग्नताको आधारमा र उहाँ की पति दुर्गा सुबेदीसंगको मेरो राजनीतिक बैरभावका कारणले मैले तेसो भनेको थिए ।
सुशीला जी न्यायाधिश हुनुभन्दा केही पहिले कांतिपुर दैनिकमा एक लेख प्रकाशित गराउनु भएको थियो । भ्रष्टाचारका मुद्दा लगाईएकाहरूको बडो गैर न्यायिक आलोचना गरिएको थियो, यहाँसम्म कि यस्ता मानिसहरूको पक्षमा कुनै वकिलले बहस पैरवी समेत गर्न नहुने र छोटो प्रकृयाबाट फैसला गरी जेल पठाउनु पर्ने लेख्नु भयो । यस्तो गैर न्यायिक चरित्रको अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति स्वयं न्यायाधिश भएर सोही मुद्दा हेर्नु पर्दा ‘प्रिजीड्यूस’ हुन्छ । यसर्थ, सुशीला जी ले यो मुद्दा हेर्नु हुन्न भन्ने मेरो अनुरोध सहितको जिकीर थियो ।
मुद्दा किन न हेर्नु ? उहाँले भन्नु भयो;
म “प्रतिवादीसंग उहाँको हाडनाता छैन । फेरी जय प्रकाश ले भनेर के नै हुन्छ र ? यो मुद्दाको फैसला मैले नै गर्नु पर्ने हुन्छ ।”
म संग कुनै उपाय थिएन । शिर निहुँराएर मैलै उहाँलाई न्यायकर्ता स्वीकार गरे ।
नागरिक दैनिक पत्रिकाको बार्षिकोत्सव थियो । सोल्टी होटेलको बडो ठूलो कार्यक्रममा संचार मंत्री भएकोले पनि होला, म पनि आमन्त्रित थिए । मेरो मुद्दामा शुरू देखिनै जोडिनु भएका बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले कयौं मानिसका सम्मुख मलाई भन्नु भयो;
“सुशीला जी ले किमार्थ पनि तपाईलाई न्याय गर्नु हुन्न् । तपाईलाई हराउनका निम्ति नै यो मुद्दा सुशीला जी लाई जिम्मा दिईएको हो। ”
तर, सुशीलाको घोर पूर्वाग्रहको घेराबाट मेरो मुद्दालाई बहिर्याउने कुनै उपाय म संग थिएन । जे आशंका थियो, सोही भयो । मैले बिशेष अदालतबाट सफाई पाएको मुद्दालाई उहाँले उल्ट्याई दिनुभयो । कुनै पनि बहालबाला मंत्रीलाई जेल पुर्याउने श्रेय उहाँले लिनुभयो ।
त्यस दिन विवेककी देवी भनी अपेक्षित सुशीला जी प्रतिशोधकी चण्डी बन्नुभयो ।
Originally posted on the author Jay Prakash Ananda’s Facebook
← Survey about Madheshi Diaspora
दिपेन्द्र झा ले लिएको संकल्पको राजनीतिक अर्थ →